Mahazo Karatra elektronika mavo misy vary 150kg, rano 15m3, éthanol 30litres isam-bolana.
Hakana 1% ny karama ary ny fanjakana mpampiasa no mandoa ny 3% ho an'ny fahasalamana.
Tetibola sy ny famatsiam-bola:
Tombanana ho eo amin'ny 4 000 000 ny isan'ireo Service National ireo.
3 000 000 SN (Latsaky ny Bac) x 200 000 ariary = 600 miliara Ariary isam-bolana
700 000 (Bac - Bac+3) x 500 000 ariary = 350 miliara Ariary isam-bolana
300 000 (Bac+3 miakatra) x 1 000 000 ariary = 300 miliara Ariary isam-bolana
Totaly karama SN:
1 250 000 000 000 Ariary/isam-bolana
15 000 000 000 000 Ariary/isan-taona =1 milliard de dollars/an
Ny tetibola anatontosana ireo tetikasa ho tanterahan'ny SN ireo moa dia hitatsika any amin'ny resaka tetikasa isan-tokony.
Asa mampidi-bola na ampitombo ny harikarem-pirenena avokoa ny ankamaroan'ny asa ampanaovina ireo SN ireo,ka dia ahavelon-tena amin'ny famatsiam-bola azy.
Ohatra amin'izany ny famokaram-bary izay ampiditra 30 milliards de $ ao anatin'ny 5 taona, satria ny voka-bary 2tonnes/ha, hiakatra 4 tonnes/ha raha kely indrindra, izay azo akarina hatrany amin'ny 7-18tonnes/ha aza izany, ka itarina 10% ny velaran-tany ho volena vary raha 3,5% monja izy amin'izao.
Ny vola ampidirin'ny fitrandrahana volamena, safira, fasimainty, terre rare, harena ankibon'ny tany sy ny bois de rose, ny harena an-dranomasina, ny jono, ny pétrol, gaz, ny fambolena sy fiompiana hafa, tsy mbola resahina, izay hamatsy ny fanamboarana ny tetik'asa.